बिचौलिया व्यापारीसँग काम गर्नु वास्तवमै खराब हो?
प्रायः सबैजना कारखानासँग सीधा काम गर्न चाहन्छ, बहुराष्ट्रिय विशालदेखि सानो व्यापारीसम्म, एक साधारण कारणका लागि: बीचको मान्छेलाई काट्नुहोस्। यो एक सामान्य रणनीति र तर्क हो B2C को आफ्नो ब्रान्डित प्रतिस्पर्धीहरूमा उनीहरूको फाइदाको विज्ञापन गर्न यसको शुरू भएदेखि नै। बिचौलिया हुनु भनेको तपाईको ब्यापार सम्बन्धमा स्वीकार गर्न चाहानु हुने अन्तिम कुरा हो जस्तो देखिन्छ। तर यसबारे सोच्नुहोस्: के तपाईं एप्पललाई छोडेर फोक्सकनबाट समान “आईफोन” किन्न चाहानुहुन्छ (यदि यो सम्भव छ भने)? सम्भव छैन। किन? के एप्पल केवल एक मध्यम मान्छे होईन? के फरक छ?
"M2C" (उपभोक्तालाई उपभोक्ता) को सिद्धान्तको परिभाषा द्वारा, उपभोक्ता र कारखाना बिचको सबै चीज बिचौलिया र खराब ठानिन्छ जुन उनीहरूले तपाईंलाई उच्च मूल्यमा बेच्ने अवसरको लागि अनुमान गरिरहेछन्। त्यसैले एप्पल यस परिभाषामा राम्रोसँग फिट देखिन्छ जस्तो उनीहरूले निश्चितको लागि आईफोन निर्माण नगर्नुहोस्। तर राम्रो स्पष्ट एप्पल केवल बिचौलिया मात्र होइन। तिनीहरू नयाँ उत्पादन र बजार, प्रविधिको मा लगानी र यस्तै। लागत यी सबै सम्भावित (र धेरै सम्भावना) लाई परम्परागत उत्पादन मटेरियल + श्रम + ओभरहेड लागत भन्दा पनि अधिक हुन सक्छ। एप्पलले तपाईलाई पाएको आईफोनमा धेरै अनौंठो मूल्य थप गर्दछ, जुन अझै केही थप धातु र इलेक्ट्रोनी भन्दा धेरै छसी सर्किट बोर्ड। "बिचौलिया" लाई ठिक पार्न मान जोड्न कुञ्जी हो।
यदि हामी क्लासिक 4P मार्केटिंग सिद्धान्तमा जान्छौं भने, यो एकदम स्पष्ट छ कि तेस्रो पी, "स्थान" वा बिक्री च्यानलि the्ग मूल्यको अंश हो। त्यहाँ उपभोक्ताहरू अवस्थित र उत्पादको मूल्यका बारे सचेत गराउन लागत र मूल्यहरू छन्। कि बिक्री मान्छे के के हो। हाम्रो परिचित ट्रेडिंग व्यवसायमा, तिनीहरू तपाईंलाई आवश्यकमा उत्पादनमा फिट गरेर सम्झौता बन्द गर्नका लागि राखिएका छन्। के कारखाना बिक्री मान्छे एक बिचौलिया हो? होईन, सायद कसैले यसलाई ध्यान दिँदैन। यद्यपि बिक्री व्यक्तिले डिलबाट कमिसन प्राप्त गरे जुन सौदाको दुवै पक्ष वा दुवै पक्षको नाफाबाट लिइएको हो, किन तपाईं उसलाई / अनावश्यक मान्नुहुन्न? तपाईं एक बिक्री मान्छे कडा परिश्रम, विषय मा उनको ज्ञान र तपाइँको लागि एक समस्या हल गर्न आफ्नो पेशेवर को सराहना हुनेछ, र तपाईं पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ कि उहाँ तपाईंलाई राम्रो सेवा गर्दछ, अधिक उहाँको कम्पनीले आफ्नो उत्कृष्ट कामको लागि उसलाई इनाम दिनु पर्छ।
र कथा मा जान्छ। अब बिक्री मान्छे यति राम्रो गरिरहेको छ कि उसले आफ्नो व्यापार सुरु गर्ने र एक स्वतन्त्र व्यापारीको रूपमा काम गर्ने निर्णय गर्यो। सबै कुरा ग्राहकमा उस्तै छ, तर ऊ अब वास्तविक बिचौलिया भइरहेको छ। ऊसँग अब उसको बास कमिसन छैन। बरु, उसले कारखाना र ग्राहक बीचको मूल्य भिन्नताबाट नाफा कमाएको छ। के तपाईं, एक ग्राहकको रूपमा, असहज महसुस गर्न थाल्नुहुनेछ, यदि उही समान उत्पादन र सायद अझ राम्रो सेवाको लागि समान मूल्य प्रस्ताव गर्दछ भने? म यो प्रश्न मेरो पाठकमा छोड्छु।
हो, बिचौलिया धेरै रूपहरू लिन्छन्, र ती सबै हानिकारक छैनन्। बck मेरो पूर्व को मामला मामहत्वपूर्ण लेख, पुरानो जापानी मानिस वास्तवमा परियोजना को सफलता को लागी योगदान पुर्‍यायो। उनले अन्तको कुशोमरको आवश्यकता बुझ्दछन् गहिरो तरीकाले आफ्नो सल्लाहमा, प्रत्येक सानो विवरणमा ध्यान दिनुहोस्, र दुबै पक्षको वास्तविकता बढावा दिनुहुन्छ। हामी उहाँविना बाँच्न सक्दछौं। जे होस्, उसलाई बीचमा राख्दा हामीलाई धेरै ऊर्जा र जोखिम बचाउँछ। यही अन्त ग्राहकलाई लागू हुन्छ, जससँग चीनबाट एक आपूर्तिकर्तासँग काम गर्ने न्यूनतम अनुभव थियो। उनले हामीलाई आफ्नो मूल्य प्रदर्शन गरे र हाम्रो सम्मान कमाए, र निश्चित रूपमा लाभ पनि।
कथाको टाढा टाढा के हो? बिचौलिया राम्रो छ? होईन, त्यो मेरो मतलब के होईन। बरु म त्यसलाई समावेश गर्छु, तपाईंको सप्लायर बिचौलिया हो कि होइन भनेर सोध्नुको सट्टा, उसको मूल्यलाई प्रश्न गर्दछ। उसले के गर्छ, कसरी उसले इनाम पाउँछ, उसको कला र योगदान, र यस्तै। एक सोर्सिंग पेशेवरको रूपमा, म बिचौलियासँग बस्न सक्छु, तर निश्चित गर्नुहोस् कि उसले आफ्नो ठाउँ कमाउनको लागि कडा परिश्रम गर्यो। एक राम्रो बिचौलिया राख्नु एक incabablle सोर्सिंग कर्मचारी भन्दा भन्दा एक छनौट विकल्प हो।
पोष्ट समय: जुन २०-२०२०